लेख > जोसेपफ Tkach द्वारा > ईश्वर पोटर
म सँधै राम्रो सिकाउँदिन। म मूल रूपमा भिजेको माटोको एक अनौपचारिक गांठ थियो। तर कसैले मलाई एक डिस्कमा राख्यो र डिस्क यति छिटो डिस्क कताई गर्न थाले कि यसले मलाई चक्कर आयो। म घुम्न जाँदा, निचोल्नुहोस्, निचोल्नुहोस् र मलाई फाre्यो। मैले चिच्याएँ: "रोक्नुहोस्!" तर मैले जवाफ पाए: "अहिलेसम्म हैन!"।
अन्तमा उनले झ्याल रोके र मलाई भट्टीमा हाले। यो चर्को र तातो भयो जब सम्म म कराउँदिन: "रोक्नुहोस्!" फेरि मैले जवाफ पाए "अहिलेसम्म हैन!" अन्त्यमा उनले मलाई भट्टीबाट बाहिर निकाले र मलाई रंग लगाउन थाले। धुवाँले मलाई बिरामी पारेको थियो, र फेरि मैले चिच्याएँ: "रोक!" र फेरि उत्तर थियो: "अझै हैन!"।
त्यसपछि उसले मलाई भट्टीबाट बाहिर निकाले र म चिस्यान भएपछि, उसले मलाई ऐनामा अगाडि टेबलमा राख्यो। म चकित भएको थिए! कुमालेले माटोको बेकारको ढिस्कोबाट केही राम्रो चीज बनाएको थियो। हामी सबै माटोका डल्ला हौं, होइन र? हामीलाई यस कुमाले कुमालेको कुमाले हाल्दा, हाम्रो मास्टर कुमाले हामीलाई नयाँ सृष्टि बनाउँदछ जुन हामी उहाँको इच्छाबमोजिम हुनुपर्छ!
हाम्रो आशा यस संसारको बाहिर र बाहिर केहि मा निहित छ। हामी भगवानको वचनमा भरोसा राख्छौं, हामी हाम्रो वर्तमान संकष्टलाई परमेश्वर हाम्रोलागी भण्डारको तुलनामा हल्का र समसामयिक मान्दछौं। तर यी परीक्षाहरू इसाई जीवनशैलीको एक हिस्सा हुन्। रोमी:: १-8,17-१-18 मा हामी पढ्छौं: «तर यदि हामी केटाकेटीहरू हौं भने, हामी पनि हकवालाहरू हौं, अर्थात्‌ परमेश्वरको उत्तराधिकारी र ख्रीष्टको संयुक्त उत्तराधिकारी, यदि हामी उहाँसँग दुःखकष्ट भोग्छौं, ताकि हामी महिमासाथ उच्च हुन सकौं। किनभने म विश्वस्त छु कि यस समयमा कष्टहरु जुन महिमाले हामीलाई देखाइन्छ त्यो हिसाब गर्दैन।
हाम्रो जीवनमा आउने सबै घटनाहरू र चुनौतीहरूमा परमेश्वर हामी प्रत्येकमा सक्रिय हुनुहुन्छ। तर हामीले सामना गर्ने कठिनाइ र परीक्षाहरू बाहेक, चाहे ती स्वास्थ्य वा वित्त वा प्रियजनको नोक्सानी समावेश होस्, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। यसले हामीलाई सिद्ध गर्दछ, हामीलाई परिवर्तन गर्दछ, यसले आकार दिन्छ र आकार दिन्छ। भगवानले हामीलाई कहिले छाड्नुहुनेछैन वा सम्झनुहुनेछैन। उहाँ सबै संघर्षमा हामीसँग हुनुहुन्छ।